Indlela yokulinganisa i-Redox Reactions
Ukulinganisa i-Redox Reactions - I-Half-Reaction Method
Lo mzobo uchaza i-half reaction of reaction redox okanye ukusabela kokunciphisa i-oxidation. UCameron Garnham, iLayisensi yeCredit Commons
Ukulinganisela impendulo ye-redox , nikela iinombolo ze-oxidation kuma- reactants kunye nemveliso ukuqinisekisa ukuba zininzi zezilwanyana zezilwanyana nganye ezifunekayo ukuze kugcinwe i-mass and charge. Okokuqala, hlukanisa i-equation kwiimpendulo ezimbini, isabelo se-oxidation kunye nesahlulo sokunciphisa. Oku kubizwa ngokuba yindlela yokwenza ukulinganisa i-redox okanye indlela ye-ion-electron . Isiqingatha ngasinye senzeke ngokuhlukileyo kwaye emva koko ama-equation ayongezwa kunye ukuze anike ukuphendula ngokulinganayo. Sifuna umrhumo wenetha kunye neenombolo zeeon zilingana kumacala omabini okulingana okulinganayo.
Kulo mzekelo, makhe siqwalasele ukuphendulelwa kwe-redox phakathi kwe-KMnO 4 ne-HI kwisisombululo esisiphumo:
MnO 4 - + I-→ I- 2 + Mn 2+
Ukulinganisa i-Redox Reactions - Ukwahlula Ukuphendula
Iibhetri ngumzekelo oqhelekileyo wemveliso esebenzisa ukuphendula kwe-redox. UMaria Toutoudaki, Getty Images
Ukwahlula iimpembelelo ezimbini:
I - → I- 2
MnO 4 - → Mn 2+
Ukulinganisa i-Redox Reactions - Ukulinganisa iAtom
Ukulinganisa inani kunye nohlobo lwee-athomu ngaphambi kokujongana nentlawulo. UTommy Flynn, Getty Images
Ukulinganisela i-athomu yesabelo ngasinye, ukulinganisela kokuqala zonke ii-athomu ngaphandle kwe-H no-O. Ngokwesisombululo esicacileyo, ngokulandelayo udibanise H 2 O ukulinganisela ii-athomu kunye no-H + ukulinganisela ii-athomu ze-H. Kwisisombululo esisisiseko, siza kusebenzisa i-OH kunye no-H 2 O ukulinganisa i-O ne-H.
Ukulinganisa iathothi ze-iodine:
2 I - → I- 2
I-Mn ekusebenziseni i-permanganate isele ilinganise, ngoko-ke masilinganise oksijini:
MnO 4 - → Mn 2+ + 4 H 2 O
Yongeza H + ukulinganisela ama-molecule amanzi amane:
MnO 4 - + 8 H + → Mn 2+ + 4 H 2 O
Iimpendulo zemizuzu emibini zilungelelanise iathothi:
Ukulinganisa i-Redox Reactions - Ukulinganisela ukuhlawulwa
Yongeza ii-electron kwi-equation ukuhlawula imali. UNewton Daly, Getty Images
Emva koko, balinganise iindleko kwi-reaction-half-reaction ukwenzela ukuba ukunciphisa i-half-react reaction kudla inani elifanayo le-electron njenge-oxidation half-response reaction. Oku kufezekiswa ngokufaka ii-electron kwiimpendulo:
2 I - → I 2 + 2e -
5 e-+ 8 H + + MnO 4 - → Mn 2+ + 4 H 2 O
Ngoku ezininzi iinombolo ze-oxidation ukwenzela ukuba iziphumo zemizuzu emibini zibe nenani elifanayo lamakhetroni kwaye ziyakhansela ngaphandle:
5 (2I - → I 2 + 2e - )
2 (5e - + 8H + + MnO 4 - → Mn 2+ + 4H 2 O)
Ukulinganisa i-Redox Reactions - Yongeza i-Half-Reactions
Yongeza i-half reaction emva kokulinganisa ubunzima kunye neerhafu. Joos Mind, Getty Izithombe
Ngoku kongeza izimpembelelo ezimbini:
10 I - → 5 I- 2 + 10 e -
16 H + + 2 MnO 4 - + 10 e - → 2 Mn 2+ + 8 H 2 O
Oku kuvelisa ukulingana kokugqibela okulandelayo:
10 I-+ 10 e-+ 16 H + + 2 MnO 4 - → 5 I- 2 + 2 Mn 2+ + 10 e-+ 8 H 2 O
Fumana i-equation ewonke ngokukhupha i-electrons kunye ne-H 2 O, H + , kunye ne-OH-enokuthi ibonakale kumacala omabini alinganayo:
10 I-+ 16 H + + 2 MnO 4 - → 5 I 2 + 2 Mn 2+ + 8 H 2 O
Ukulinganisa i-Redox Reactions - Hlola umsebenzi wakho
Hlola umsebenzi wakho ukuze uqiniseke ukuba kuqondakala. UDavid Freund, Getty Images
Hlola amanani akho ukuqinisekisa ukuba ubunzima kunye neentlawulo zilinganayo. Kulo mzekelo, i-athomu ngoku i-stoichiometrically balinganise ne-+4 intlawulo yentlawulo kwicala ngalinye lempendulo.
Inyathelo 1: Ukusabela kwempembelelo kwisigidi-mpendulo nge-ions.
Inyathelo 2: Ukulinganisa i-half-reaction-reaction stoichiometrically ngokungeza amanzi, i-hydrogen ions (H + ) kunye ne-hydroxyl ions (OH - ) ukuya kwimizuzu.
Inyathelo lesi-3: Ukulinganisa i-half-reaction-reaction charges ngokufaka ii-electron kwi-half reaction.
Inyathelo lesi-4: Phinda ulandelelaniso lwesigqibo ngasinye ngesigxina sobomi bobabili banomlinganiselo ofanayo wee-electron.
Inyathelo lesi-5: Hlanganisa impendulo ezimbini. Iifowuni kufuneka zicime, ziyeke ukulungelelanisa ukuphendula ngokutsha.
I-Acide Mineral Definition kunye noLuhlu
Iintlobo ezahlukeneyo zeMeniscus kwiSayensi
Yintoni Umgaqo We-Boyle Law?
Ziziphi ii-4 ezininzi zeGases kwiMimoya yomhlaba?
I-Mass Spectrometry - Yintoni Eyona Nendlela Esebenza ngayo
Izakhiwo ze Lewis okanye i-Electron Dot Structures
"Oothixo baseYiputa": Ifilimu ejongene neengxaki malunga nehlabathi la mandulo
Yintoni eyenzekayo kwiCore Milky Way?
Biography kaNathaniel Hawthorne
Ukuqonda Ukufunda Ukucetyiswa kweeNkcazo Bonke abaFundeli bafuna
Bur Oak, J. J. Sterling's Tree Tree
Ukuqonda iZikhokelo zeNgoma yesiStrophic
Iziqinisekiso eziphezulu ezi-7 ze-Freelancers kunye nabacebisi
Izitalathisi zasePompeii - Iifoto zeSixeko saseRoma
Ukuchithwa kweMichiza yeNguqulelo kwiKhemistry
Ngubani owafaka iiRobhothi?
Ukungapheliyo kwi-Mythology yamaGrike
Izinto Ezibalulekileyo Ukukwazi NgoMzantsi Korea